ब्लग-टिपिंग: पीजीए-लिलामी | Martech Zone
टम अनुरोध गरेको छ कि म उनको ब्लग टिप, पीजीए लिलामी। र म liणी गर्न पाउँदा खुसी छु! टमको ब्लग उसको eBay व्यवसाय को बारे मा छ र उनी लिलामीमा करीव नजर राख्छन् त्यसैले त्यहाँ धेरै प्रतिस्पर्धी छन् र हामीले उसलाई केही सहयोग लिन आवश्यक छ!
पहिले, लिंक मा सुधार्न निश्चित गर्नुहोस् लिंकको साथ मेरो ब्लगमा पोष्ट गर्नुहोस्… जब तपाईं HTML बाट कोडमा प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहुन्छ, कहिलेकाँही यसले उद्धरणहरू गडबडी गर्दछ। मैले अपडेट गरेको छु टेक्स्टेरियाको साथ मूल पोष्ट... अब यदि तपाइँले यसलाई सीधा प्रतिलिपि गर्नुभयो भने, यसले काम गर्दछ।
सुरक्षा कारणका लागि तपाईले बिल्कुलै गर्नु पर्छ WordPress उन्नयन गर्नुहोस् पछिल्लो र सबैभन्दा ठूलोमा जारी। मैले तपाईंको ब्लगमा पढें कि तपाईं अपग्रेड समस्याहरूमा दगुर्नुभयो। के त्यो अझै पनी छ? 2.0 संस्करण अब २.०.१० मा छ यदि तपाईं २.२१ मा अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्न भने।
खोजी ईन्जिनहरूले तपाईंको साइटको वरिपरि कसरी पुग्ने भनेर जान्नु आवश्यक छ। तिनीहरू यो उपकरणको एक जोडी मार्फत कुशलतापूर्वक गर्छन्। पहिलो उपकरण एक robots.txt फाइल हो। यो केवल टेक्स्ट फाईल हो जुन क्रॉलरले कहाँ हेर्ने र कहाँ तपाइँको साइटमा नहेर्ने भनेर जान्न पढ्छ। तपाईं नोटप्याड मात्र प्रयोग गरेर फाईल बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि FTP लाई तपाईंको सर्वरमा र वेब डाइरेक्टरीमा ड्रप गर्न।
प्रयोगकर्ता-एजेन्ट: * अस्वीकृत गर्नुहोस्: / wordpress / wp- साइटम्याप: http://www.pga-autions.com/wordpress/sitemap.xml
अर्को तरीका जुन तपाइँको साइटको वरिपरि खोजी इञ्जिनहरू पाइन्छaबाट हुन्छ साइटमैप। मलाई विशेष गरी b.० बी love लाई मनपर्दछ गुगल साइटम्याप प्लगइन। याहूलाई बुझाउन मैले यसलाई परिमार्जन गरेको पनि छु! साथै लेखकलाई कोड पठाइयो तर उसले अर्को रिलीजमा निर्माण गरेको छैन। यसले साइटम्याप निर्माण गर्दछ।
अब - यो अलि मुश्किल भैरहेको छ किनकि तपाईंसँग वेब साइट र वर्डप्रेस ब्ल्ग छ। तपाईंलाई यो थाँहा छैन, तर वर्डप्रेसको भर्खरको रिलीजमा यस्तो सुविधा रहेको छ जहाँ तपाईं कुनै पृष्ठलाई गृह पृष्ठ बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईंको ब्ल्ग कतै टाँस्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंलाई तपाईंको अन्य पृष्ठहरू (एफएक्यु, नीति, आदि) सार्न सक्षम गर्न सक्दछ तपाईंसँग आफ्नो ब्लगमा र वर्डप्रेस तिनीहरूलाई ह्याण्डल गर्नुहोस्। फाइदा यो हो कि तपाईं तिनीहरूलाई तपाईंको स्वचालित रूपमा उत्पन्न साइटम्यापमा राख्न सक्नुहुन्छ! म साच्चिकै यो सिफारिश गर्दछु र तपाइँको WordPress स्थापना तपाइँको साइटको मूल डाइरेक्टरीमा राख्नुहोस्!
तपाईंले साइट सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ सामग्रीमा बाधा नपुर्‍याई तपाईंले पहिल्यै सिर्जना गरेको त त्यहाँ कुनै चिन्ता छैन! यदि तपाईं यो गर्नुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् तपाईंको रोबोट्स.टी.टी.एस्. फाइललाई सही डाइरेक्टरीमा साइटम्यापमा सूचित गर्न।
तपाइँ ईबे लाई ठीक WordPress मा एकीकृत गर्न पनि सक्नुहुन्छ! यसमा लेख मैले फेला पारे, साइट प्रयोग गर्‍यो eBay सम्पादक किट एक थप्न ईन्भेन्टरी सूची तिनीहरूको वर्डप्रेस साइडबारमा.
कोही पनि अज्ञात कसैबाट सल्लाह लिन मन पराउँदैनन्, हैन? मँ पक्कै तपाईको पृष्ठ मा एक तस्वीर राख्छु। यदि यो राम्रो हो (ठट्टा गर्दै), तपाईं यसलाई प्रत्येक पृष्ठमा तपाईंको विषयवस्तुमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ। क्यामेरा लजालु नहुनुहोस् - मान्छेहरूले उनीहरूलाई एक चोटि हेरेर उनीहरू पढ्दै छन् कि कसको ब्लग पढेर जान्नको लागि साँच्चिकै कदर गर्दछ।
तपाइँको फिड मा स्विच गर्नुहोस् फिडप्रेस वर्डप्रेस फिडबर्नर प्लगइन प्रयोग गरेर तपाईं कति व्यक्तिहरू ब्लॉग गर्न सक्नुहुन्छ आरएसएस मार्फत तपाईंको ब्लग पढ्दै हुनुहुन्छ र तपाईंको आरएसएस लिंकलाई तपाईंको साइडबारमा माथि आइकनसहित राख्नुहुन्छ ताकि मान्छेहरूले यसलाई फेला पार्न सक्दछन्। । फिडबर्नरसँग अन्य विकल्पहरू पनि छन्, जस्तै ईमेल सदस्यता फारम तपाईं आफ्नो साइटमा राख्न सक्नुहुन्छ।
मैले यो प्लगइनमा उल्लेख गरें दुई अन्य सुझावहरू: मान्छेहरू वरिपरि राख्न, म सिफारिस गर्दछु सम्बन्धित पोस्ट प्लगइन र सम्बन्धित पोस्टहरू तपाइँको पोष्टहरूको प्रत्येकको तल राख्नुहोस्। यस तरीकाले व्यक्तिहरूले तपाईंलाई खोज ईन्जिनको माध्यमबाट फेला पार्दछ तपाईंको पोष्टहरू पढ्दछन् र यदि उनीहरूलाई वास्तवमै के चाहिन्छ भन्ने कुरा फेला पार्दैन भने, तिनीहरू समान लेखमा थप लेखहरू खोज्न सक्छन्। यसले पनि सहयोग पुर्‍याउँछ गहिरो सम्बन्ध खोज इञ्जिन श्रेणीकरण को लागी।
तपाइँलाई कसरी थाहा हुन्छ कि तपाइँको साइटमा के पढिँदैछ? तपाईं राम्रो विश्लेषक प्याकेज बिना गर्नुहुन्न। म अत्यधिक सिफारिश गर्दछु क्लिक वेब एनालिटिक्स। यदि तपाईं प्रो संस्करण प्राप्त गर्नुहोस्, तपाईं एक WordPress प्लगइन डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंलाई उठाउन र चालू गर्न!
तपाईका आगन्तुकहरु कहाँबाट आउँदै छन्, के खोज्दै छन्, आदि जानेर तपाई धेरै कुरा सिक्नुहुनेछ।
यो सबै को बारे मा छ फेला पार्न सकिने, Tom! हामीले खोजी ईन्जिनहरूलाई भन्नु पर्दछ कि तपाईंलाई कसरी र कसरी पाठकहरू र खोज इञ्जिन स्तर निर्धारण आउँदछ। तपाईं छविहरू पोस्ट गर्ने र स्पष्ट, संक्षिप्त पोष्ट लेख्नको ठूलो काम गर्नुहुन्छ। तपाईंको पोष्ट शीर्षकहरू उत्कृष्ट छन् ... निस्सन्देह एकचोटि हामीले तपाईंलाई खोज्ने इन्जिन खोजे पछि, तपाईंको ब्लग पाठकहरूको रूपमा चढ्न थाल्नेछ र बिक्रीमा तपाईंको eBay स्टोर!
टैग: ब्लगक्लिकिकeBayलिङ्कPermalinkसम्बन्धित पोष्टहरूखोज इन्जिनसुरक्षाWordPress
विकी भनेको के हो? एक भिडियो
एनालिटिक्स उपकरण ब्ल्गका लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ, अन्यथा तपाईले आफ्नो ब्लगको साथ के हुँदैछ थाहा पाउनुहुने थिएन।
मसँग एक बर्षको लागि एनालिटिक्स बिना ब्लगहरू थिए, जबसम्म म यस जस्तो ब्लग पोष्टिंगहरू मध्ये कुनै एक पढ्छु। मैले विगतमा क्लिकलाई प्रयोग गरेको छु, यद्यपि मैले भन्नु पर्ने उत्तम कुरा हो GoStats.com , तिनीहरूसँग एक व्यापक रिपोटिंग प्रणाली छ।